Kedu ka Google si ewue ndi nyocha ya? - Azịza ọma
Nchịkọta weebụ aghọwo ọrụ dị oké mkpa na nzukọ ọ bụla n'ihi ọtụtụ uru ọ bara. Ọ bụ ezie na ọ bụla ụlọ ọrụ ọ bụla na-erite uru na ya, ihe kachasị dị irè nke nchịkọta weebụ bụ Google.
A na - ejikọta Google ngwa ntanetị weebụ n'ime atọ isi, ha bụ:
A na-akpọkwa crawlers Google dị ka bọtịnụ Google. A na-eji ha maka nyocha ọdịnaya nke ibe ọ bụla na weebụ. E nwere ọtụtụ ijeri weebụ na weebụ, a na-elekwa ọtụtụ narị mmadụ anya na nkeji ọ bụla, n'ihi ya, bọtịnụ Google ga-agbaji ibe weebụ niile ngwa ngwa dị ka o kwere omume.
Akpụkpọ ụkwụ ndị a na-agba ọsọ na ụfọdụ algọridim iji chọpụta saịtị iji ịwọrọ na ibe weebụ iji kpochapụ. Ha na-amalite site na ndepụta nke URLs ndị e mepụtara site na nhazi usoro mbu. Dịka algọridim ha si kwuo, ndị bọọlụ a na-achọ njikọ na ibe ọ bụla ka ha na-egwu ma tinye njikọ na ndepụta nke ibe ndị a ga-atụgharị. Ka ha na-agbagharị na weebụ, ha na-eleba anya na saịtị ọhụrụ na ndị emelitere.
Iji dozie echiche na-ezighị ezi na-ezighị ezi, bọtịnụ Google enweghi ike ịkwado weebụsaịtị. Nke ahụ bụ ọrụ nke ndepụta Google. Bots na-eche banyere ịnweta ibe weebụ n'ime oge kachasị ike. Na njedebe nke usoro ha na-agba agba, Google bots gbanwere ihe niile gbakọtara na ibe weebụ gaa na ndepụta Google.
2. Ndepụta Google
Ntọala Google nabatara ihe niile a kpochapụrụ site na bọọlụ Google ma jiri ya mee ka ibe weebụ wepụ. Ntugharị Google na-arụ ọrụ a dabere na ya algọridim. Dị ka e kwuru na mbụ, nchịkọta Google na-edebe ebe nrụọrụ weebụ ma na-eziga ọrụ iji sava sava nsonaazụ ọchụchọ. Ebe nrụọrụ weebụ na ọkwa dị elu maka otu niche na-apụta na mbụ na ibe nsonaazụ ọchụchọ n'ime niche ahụ. Ọ dị mfe dị ka nke ahụ.
3. Nchọpụta Nchọta Mmasị Google
Mgbe onye ọrụ na-achọ isiokwu ụfọdụ, a na-arụ ọrụ weebụ kachasị mkpa ma ọ bụ laghachi na iwu nke mkpa ha. Ọ bụ ezie na a na-eji ọkwa eme ihe iji chọpụta mkpa nke weebụsaịtị iji chọpụta isiokwu, ọ bụghị naanị otu ihe eji eme nchọpụta. E nwere ihe ndị ọzọ eji eji chọpụta mkpa nke ibe weebụ.
Onye ọ bụla njikọ dị na ibe sitere na saịtị ndị ọzọ na-akwado ọkwa na mkpa nke ibe. Otú ọ dị, njikọ niile anaghị aha. Njirimara ndị kasị baa uru bụ ndị e nwetara n'ihi àgwà nke ọdịnaya ahụ.
Tupu ugbu a, ọnụ ọgụgụ nke ugboro otu isiokwu pụtara na ibe weebụ nke eji eme ka ọnọdụ nke ibe ahụ dịkwuo elu.Otú ọ dị, ọ dịghịzi eme. Ihe dị mkpa na Google bụ àgwà ọdịnaya. A na-agụgụ ọdịnaya iji gụọ, ọ bụrụ na ndị na-agụ akwụkwọ na-adọta mmasị ọdịnaya na enweghị ọnụ ọgụgụ dị nro. Ya mere, amaokwu kachasị mkpa maka ajụjụ ọ bụla ga-enwe ọkwa kachasị elu ma pụta na mbụ na nbona ajụjụ ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, Google ga-atụfu nkwenye ya.
N'ikpeazụ, otu eziokwu dị mkpa iji wepụ ya n'isiokwu a bụ na n'enweghị ntanetị weebụ, Google na engines ọchụchọ ndị ọzọ agaghị alọghachi ọ bụla Source .